Gbalịa 5 Downloadify Alternatives ma ọ bụrụ na ọ na-adịghị arụ ọrụ mgbe nile
N'ihi na ndị gị na-amasị-ege ntị online music eji dị iche iche gụgharia ọrụ ndị dị ka Youtube ma ọ bụ Spotify, ugbu a na mgbe ahụ, ị ​​nwere ike chọrọ ka ịdekọ otu n'ime ndị songs gị na kọmputa. Anyị mere mgbalị na-agbalị si ụfọdụ ndị kasị mma na ndị kasị ewu ewu ọdịyo ndekọ ngwa na ahịa. Na nke a obere nyochaa anyị ga-a lee anya na Apowersoft Online audio edekọ, Wondershare Streaming Audio Recorder, Free Sound teepu, Aktiv MP3 teepu nakwa dị ka ezi ochie Streamosaur. Niile nke ndị a omume eme nnọọ nke ọma ihe ha na e desogned n'ihi na, Otú ọ dị, ụfọdụ n'ime ha na-enye ndị ọzọ.
3. Free Sound teepu
Mfe iji, Arụ ọrụ ID usoro, Ringtones Editor
Naanị akwado 2 audio formats.
Wondershare Streaming Audio Recorder Na-enye gị ike idekọ online audio ọdịnaya, ma ọ na-akwado song na omenkà njirimara, na-azọpụta gị nsogbu nke edezi, na ee, ọ n'ezie ọrụ. Ihe omume ahụ bụ bụghị free ma ọ na-enye gị a 7 ụbọchị ikpe oge enweghị ihe ọ bụla mgbochi, nke bụ ihe karịrị oge zuru ezu n'ihi na ị na-ekpebi.
Ozugbo ị idekọ gị ọdịnaya ị nwere ike inyocha ya na agbakwunyere ọkpụkpọ, ike ụdaolu ma hazie ha, nke ị nwere ike mgbe e mesịrị bulite gị iTunes n'ọbá akwụkwọ, na-eme ka ị na-mekọrịta ya niile nke gị iDevices. Usoro ihe omume na-akwado naanị 2 ụdị nke format MP3 na MP4 ma i nwere ike ajdust ndekọ ntọala dị ka mma. Otú ọ dị inwe n'uche na ọ na-eburu $ 19 price mkpado, anyị na-eche free na-ekwu na ị ga-esi nnọọ ka ị na-akwụ ụgwọ maka na ma eleghị anya ọbụna karị. Nke a software na-esochi a set nke video Nkuzi ka unu wee na ka malitere. Wondershare Bụkwa maka na Mac dị ka mma.
Voice ebighị, Nhazi oge, ya Free
Ọ dịghị agbakwunyere ọkpụkpọ
Free ụda edekọ bụ kpam kpam free elu, nke na-akwado dị iche iche formats, dị ka MP3, OGG, WMA na WAV.
UI bụ mma nke ukwuu rudimentary na ọ bụ ezie, dị ka anyị na-ama kwuru, ngwa akwado iche iche nke formats, nakwa dị ka nhazi nke bit ọnụego na àgwà nke dere ọdịnaya ọ na-adịghị inwe ya ọkpụkpọ ma ọ bụ ụfọdụ n'ime ihe ọzọ dị elu atụmatụ akọwara na software n'elu. Otú ọ dị ya akwado Voice ebighị na-eme schedules, nke na-eme ya niile na ihe niile a nnọọ ezi nhọrọ ebe ọ bụ, ka anyị dịghị echefu, free. E nwekwara a mma ebe i nwere ike hazie gị na-ekpo ọkụ igodo.
Ọ dịghị ndị ọzọ atụmatụ
Streamosaur bụ ihe ndị kasị mkpa mpempe Ndekọ software i nwere ike ịhụ na internet. Ọ nwere fọrọ nke nta ihe ọ bụla ihe gara aga ndekọ nwere ma nkwado maka 2 formats: MP3 na WAV. Ọ dịghị Voice ebighị, ọ dịghị usoro ihe omume aga-eme, ọ dịghị Tweaks mgbe ọ na-abịa rụọ àgwà nke ihe onwunwe ị bụ banyere Dekọọ. Steamosaur amalite ndekọ mgbe ị inupụ bọtịnụ na nke ahụ bụ banyere ya, Otú ọ dị ndị na-enweghị mmasị na ndị ọzọ elu atụmatụ nwere ike inye a ọkpụkpọ a ngafe, ebe ọ bụ na ọ na-adịghị require'any echichi bụla.
Gụgharia audio Recoder
Nke nke na-akwado formats 2 2 4 2
Nyefee gaa na ngwaọrụ
Idozi id3 mkpado, cover, jikwaa music n'ọbá akwụkwọ
Ahịa $39.99 $ 19 Free Free
Dị ka anyị ikpeazụ echiche anyị kweere na chaatị bụ mma onwe nkọwa. Mgbe ọ na-abịa onwe software Free Sound na Aktiv MP3 ndị fọrọ nke nta otu ihe ahụ. Free Sound si UI bụ dịtụ ọzọ mfe ịnyagharịa karịa Aktiv MP3 si bụ. N'aka nke ọzọ Aktiv MP3-akwado ndị ọzọ formats nke pụrụ ịdị na-atụgharị atụgharị mgbe n'ihi na ụfọdụ ndị ọrụ. Streamosaur bụ a na-anwụ anwụ ìgwè n'ọsọ a.
Wondershare Enye kasị atụmatụ tụnyere niile nke ngwa ọdịnala na anyị ule. The price mkpado bụ mara mma ezi uche na ọ bụ anyị kweere na-enye ihe karịrị gị ibido bargained maka. Apowersoft efu ukwuu (ugboro abụọ dị ka ihe karịrị Wondershare) ma ọ dịghị akwado niile nke atụmatụ na ya isi osompi nwere. Ọ bụ ezie na ọ bụ nanị mpempe software na anyị na ule na ike idekọ na FLAC Ọkpụkpọ na ọ na-enye a wider nso nke nhọrọ mgbe ọ na-abịa ngbanwe tụnyere Wondershare.
> Resource> Alternatives> Downloadify-adịghị arụ ọrụ na All? Gbalịa Ya Alternative ugbu a